Kuphi ukuthenga ubungcwele obuphezulu 17-Methyltestosterone powder online? | AASraw
Kuphi ukufumana umthengisi we-17-Methyltestosterone powder online?
/Blog/17-Methyltestosterone/Kuphi ukufumana umthengisi we-17-Methyltestosterone powder online?
ezaposwa ngomhla 02 / 08 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo 17-Methyltestosterone. Ibe 1 Comment.
17-Methyltestosterone, eliqhelekileyo elibizwa ngokuthi iMethyltestosterone, ifom efumanekayo ngomlomo we-androgen testosterone yesibini. I-Methyltestosterone ifomu eyenziwe ngumntu testosterone, okwenzeka ngokwemvelo sex hormone eveliswa kumathambo omntu. Inani elincinci le-testosterone liveliswa kwiiyunithi zowesifazane kunye ne-adrenal system. I-Methyltestosterone isetyenziselwa amadoda kunye namakhwenkwe ukuba aphathe iimeko ezibangelwa ukungabikho kwezi hormone, ezifana nokulibaziseka okanye ukunye ukungalingani kwama-hormonal. I-Methyltestosterone isetyenziswe kwabesetyhini ukunyanga umdlavuza webele oye wasasazeka kwezinye iindawo zomzimba.
Ukujongwa kwisakhiwo steroid, sibona ukuba yi-testosterone kuphela eneqela le-methyl eline-c-17 ye-alpha (i-c-17 alpha alkylated substance), evumela ukulawulwa komlomo. Isiqhamo esiphumelayo "i-methylated-testosterone" sasiphakathi kwe-steroid yomlomo yokuqala yokusebenza. Le ntsimi yophando yiphucule kakhulu kwiminyaka, kwaye namhlanje i-methyltestosterone ayikho into ecacileyo xa kuthelekiswa namanye amaninzi amaninzi aye aphuhliswa. Isenzo sale steroid sinomdla ngokulinganisela i-anabolic kunye ne-androgenic, kunye nomsebenzi ophezulu we-estrogen ngenxa ye-aromatization yayo kwi-17-alpha methyl estradiol. Oku kubangela ukuba i-methyltestosterone ixakeke kakhulu (ngokubhekiselele kwimiphumo yecala ye-estrogenic) yokusebenzisa iinjongo zokwakha izistim.
Inkcazelo ye-17-Methyltestosterone powder
I-17-Methyltestosterone Powder, luhlobo lwepowder elimhlophe.Ngokuba i-17-Methyltestosterone i-17-Methyltestosterone, i-17-Methyltestosterone ipow powder enye yokuthengiswa okutshisayo phakathi kwee-sarms, kungekhona nje ngenxa yexabiso le-17-Methyltestosterone ye-powder, kodwa i-beacuse ephezulu ukucoceka kwe-XNUMX-Methyltestosterone eluhlaza, ewe, ukuba ndiyithenge I-17-Methyltestosterone i powder bulk, okanye ukusebenzisa i-lab, ndakhetha ukukhetha ukuthenga i-17-Methyltestosterone eluhlaza kwi-intanethi, khetha i-17-Methyltestosterone powder nomthengisi othembekileyo kwaye ugcine uxolo oluqinileyo. Iinkcukacha zeenkcukacha ze-17-Methyltestosterone ngobuninzi befowuni AAS njenge:
Ukufunwa: I-powder emhlophe
I-Assay: ngaphezulu 98%
Ukulahleka ekumiseni: ngaphantsi kwe-0.5%
Uninzi oluMandla: ngaphantsi kwe-0ppm
Ixesha elimisiweyo: imizuzu ye-20
Iimpembelelo ze-17-Methyltestosterone powder
Xa kuziwa kwimiphumo ye-Methyltestosterone, kubalulekile ukuqonda ukuba i-catalyst eyona nto eyona nto i-percentage ye-androgen kwi-bloodstream yakho. Le yilapho iqala khona iincinci ezininzi, kodwa ngeMethyltest, yinto enamandla kakhulu. Emva kokuba ukwandise ngokukhawuleza nje ukuba uninzi kangakanani kwindlela yakho, uya kuqaphela ngokukhawuleza ukuba kusebenza njani. Izizathu zokusebenzisa i-Methyltest zinxulumene nokujongana namanqanaba aphantsi aziswayo ngaphandle kwemeko. Kusenokwenzeka ukuba uphinde uphathe ingxaki eyahlukileyo ngokupheleleyo, ngoko ukunyuka kweemvavanyo kuya kufuneka kakhulu. Kungakhathaliseki ukuba kutheni ufuna ukuwusebenzisa, iziphumo eziza kuphawula ziya kuba kukunyuka kwe-sex drive (libido) kwakunye neemvakalelo zokukhuthaza amandla nokubuyela kumgangatho oqhelekileyo. Ezi zinto zivame ukuhla namazinga aphantsi okuvavanya, kodwa ukuba uziva kwakhona emva kokuqala iMethyltest, yile mpendulo yakho malunga nesizathu sokuba kufuneka uzame ukuxhasana nayo. Iziphumo ezikhankanywe ngasentla kukuba kutheni abantu abaphethwe yimihla yokuphela kwesidlo okanye ukuhlaselwa kwexesha elide baya kunandipha ukuyisebenzisa, kwaye ngokungathandabuzekiyo, abantu abawela kwiintlobo zeengxaki kufuneka babe ngabantu abasemqoka abafanele bacinge ngokuyisebenzisa okokuqala.
Indlela yokusebenzisa ngokufanelekileyo i-17-Methyltestosterone powder?
Ucwaningo luye lwabonisa ukuba ukuthatha i-anabolic steroid yomlomo kunye nokutya kunokunciphisa ukuhlaziywa kwayo. Lokhu kubangelwa uhlobo lwe-fatty soluble lwe-hormone ye-steroid, enokuvumela ezinye zezidakamizwa ukuba zichithwe ngamafutha amaninzi angadliyo, ukunciphisa ukutyathwa kwayo kwindlela . Ukusetyenziswa okuphezulu, le steroid kufuneka ithathwe kwisisu esingenalutho.
I-17-Methyltestosterone powder dosage kumntu: (Ukubhekisela)
Ukunyanga i-androgen ukungakwazi, ukuchaza izikhokelo zefowuni ye-10-40 mg. I dose yancitshiswa ngu-50% xa ilawulwa kwifom yangasese okanye ibhakali. Isilwanyana singasetyenziselwa ixesha elide ixesha elide njengoko iziphumo zelabhoratri ze-patent (i-hepatotoxicity, i-serum lipids, njl njl). Xa zisetyenziselwa iinjongo zomzimba okanye zokunyusa ukusebenza, i-10-50 mg isetyenziswa rhoqo, isetyenziswe kwiimjikelezo ezingapheli ngaphezu kweeyure ze-6-8 ubude. I-Methyltestosterone isetyenziswa ngokuqhelekileyo kungekhona njenge-anabolic, kodwa ukuvuselela ubugwenxa kumsebenzisi. Abaphathi be-Powerlifters, i-bodybuilders, kunye nabadlali abakhuphisanayo banamaxesha amaninzi bazama ukusebenzisana nale mphumela, bekhangela ubungqina obongezelelweyo kwiseshoni yoqeqesho okanye ukhuphiswano. Ngaphandle kwalokhu, i-methyltestosterone inikezela ngaphandle kweempembelelo. Inetyhefu, iphakamisa i-enzyme yesibindi kwaye ibangela i-acne, i-gynecomastia, ulwaphulo, kunye nokugcinwa kwamanzi ngokulula. Ngaba omnye unokunyamezela le micala emibi, i-methyltestosterone izokunikela kuphela ngexabiso elibi (bulky). Omnye kufuneka alungiselelwe ukulahleka okukhulu kobukhulu kunye nomzimba womzimba ekupheleni komjikelezo ngamnye kunye ne-methyltestosterone, ngenxa yezinga eliphezulu lokuphuma kwamanzi xa isisigxina siphelile (ngexesha lokugcinwa kwamanzi lokugcina amanzi liya kubakho ipesenteji enkulu fumana).
I-17-Methyltestosterone ifowder powder yebhinqa: (Ukubhekisela)
I-Methyltestosterone ayisebenzisi ngokubanzi nabasetyhini kwiyeza zonyango. Xa isetyenzisiweyo, isetyenziswa ngokuqhelekileyo njengemithi yesibini ngexesha lomhlaza wesibeleko, xa ezinye iindlela zokwelapha ziye zahluleka ukuvelisa umphumo onqwenelekayo. Imilinganiselo esetyenziswe kule sicelo ingaba phezulu njengoko i-200 mg ngosuku. Ukusetyenziswa okuphantsi kwe-methyltestosterone kusetyenziswe kwiminyaka yakutshanje ukunyanga iimpawu zokunquma kwesisu. Umzekelo ngumveliso oyi-Estratest, equkethe i-estrogens kunye ne-2.5 mg ye-methyltestosterone. Isilinganisi se-tablet ye-1 ngosuku sinokuphucula amandla, i-libido, kunye nesimo esipheleleyo sesigulane, kunye nokulwa kwe-osteoporosis (ngelixa i-estrogen ithatha indawo ingayimisa ukulahleka kwe-calcium emathanjeni, i-testosterone ithambe ukwandisa izitolo ze-calcium). I-Methyltestosterone ngokuqhelekileyo ayikhuthazwa ngabasetyhini ngenjongo yokuziphathisa umzimba okanye yokunyusa ukusebenza ngenxa yobume bayo obuqinileyo kunye nokuthambekela kokuvelisa iziphumo ezibi.
Ziziphi iimpembelelo ezingasetyenziswayo ze-17-Methyltestosterone?
Shayela ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba unayo nayiphi na imiphumo emibi:
uvakalelwa kukuphefumula, nangona usebenza ngamandla;
ukuvuvukala, ukufumana isisindo somzimba ngokukhawuleza;
ukunyuka okanye ukuqhubeka kwipenisi;
ukhathazeka kwethambo, ukoma ukwanda, inkumbulo yeengxaki, ukuvalelwa, ukudideka, isisulu, ukuphelelwa kwesidlo, ukwanda kwamanzi, ubuthakathaka, ukuxhatshazwa kwemisipha; okanye
ukucabangela, ukuhlanza, isisu, ukuphelelwa kwesidlo, kunye ne-jaundice (ophuzi kwesikhumba okanye amehlo).
Abasetyhini abafumana i-methyltestosterone bangavelisa iimpawu zesintu, ezingenakuphikiswa ukuba unyango lwe testosterone luqhubeka. Yeka ukuthatha le gciwane uze ubizele ugqirha wakho kanye xa ubona nayiphi na yale miqondiso ye-testosterone engaphezulu:
Ukukhula kweenwele zendoda (njengokwesikhumba okanye esifubeni);
ilizwi elimnyama; okanye
Iziphumo ezingekho phantsi kwezibi kakhulu (kumadoda okanye kwabasetyhini) zingaquka:
i-acne, utshintsho kumbala wesikhumba;
intloko, ukuxhalaba, ukukhathazeka;
ukugungqa okanye ukuva; okanye
ukwandisa okanye ukunciphisa umdla wesini.
Oku akusiyo uluhlu olupheleleyo lweempembelelo kwaye abanye bangenzeka. Tshela ugqirha wakho malunga naluphi na umphumo oqhelekileyo okanye ophazamisayo.
Ukusebenzisa i-peroid yokuxoxa nabaxhasi bethu, undixelele into ethile, ndiyibheja oku mhlawumbi kukunceda.Ungakwazi ukuzama.
Ngexesha leperoid yokufumana umthengisi othembekileyo we-17-Methyltestosterone powder, wazama iindlela ezininzi.
Okokuqala, zama ukukhangela umthengisi we powderfil ophezulu we-20, kwaye uzama ukwazi ezinye iinkcukacha, kodwa ngokubhekiselele ekubhekiseni.
Okwesibini, zama ukukhangela kwi-google, i-youtube, i-pinterest kunye nezinye iifom ezifanelekileyo, kutheni ndixhomekeke kakhulu kule nto? Ngenxa yenkampani ekhuphayo kwaye inokwethenjelwa, kufuneka yenze ukuba ubukho babo bubukeke buntwini. imifanekiso kunye neeblogi ... .bungqina obunamandla ..
Ngaloo ndlela, kufumaneka inkampani ye-AAS, umboneleli we-17-Methyltestosteron powder, enekhwalithi ephakamileyo kunye nenkonzo enhle.
I-AASraw ye-Biochemical Technology Co. yahlelwa kwakhona yi-Shanghai yase-Shanghai yaseBlookystem Engineering Laboratory e-2008, eyakhiwa yi-5 yaseTshayina Ph. Oogqirha, abaphakanyisiwe kwi-Khemishini yobunjineli kwiYunivesithi yaseTulsa, e-Oklahoma, eU.SA. Imveliso ephezulu: i-anabolic steroids i-powder eluhlaza , ukwakha umzimba, ukuqina, ukulahlekelwa ngamafutha, amahomoni esondo, ii-SARMS, iziyobisi ze-PCT, i-HGH, homebrew, ugl.Ngokwezinto endaziyo, Xa uthatha isigqibo sokuthenga i-17-Methyltestosterone powder evela kwi-AAS, izinto omele ukwenze yile:
2.Thumela i-imeyli okanye uthumele imiyalezo kwi-whatsapp kubantu abasebenza kwi-AAS, njenge-Demi, bathetha ngokucacileyo, malunga nokuhlanzeka, ubungakanani, Ukuthumela, idilesi, ukhethe intlawulo efanelekileyo, iimpahla zingathunyelwa ngaphandle kweeyure ze-12 emva kokuhlawula , emva kokuhlawulwa, uya kufumana inamba yokulandelela, kwaye inkonzo ye-AAS yamakhasimende iya kugcina uyihlaziye ngexesha, ngoko kufuneka uhlale phantsi ngokukhawuleza, ulinde iplasela yakho.
tags: 17-Methyltestosterone powder, bathenge i-17-Methyltestosterone powder, 17-Methyltestosterone powder
Veerappan Palani Selvam06 / 03 / 2018 kwi-12: 36
Nkosi uSir / Mdm
Imiqathango evela kuSelvam. Ndingumdlali wezinto zezilwanyana zaselwandle esebenza eSingapore nginefama yaseTilapia eIndiya. Ndingathanda ukuthenga le hormone i-hormone ye-metyle i-hormone foe yam ifama ye-tilapia. Nceda undicebise indlela yokufumana kunye nokwenza intlawulo nge. Ndiza kukuxabisa ngokuphendula kwakho ngokukhawuleza kunye nento. Enkosi
Thenga i-Potolone powder for building body: iziphumo ze-RAD140 kufuneka wazi!	Iimpembelelo zeClostebol i-Acetate powder: Kutheni abantu bathanda i-Tbol?